नेपालमा सेना, प्रहरी छैन, लप्सीफेदी टावरको सुरक्षा गर्न अमेरिकी आउनुपर्ने ? - Thulo khabar
नेपालमा सेना, प्रहरी छैन, लप्सीफेदी टावरको सुरक्षा गर्न अमेरिकी आउनुपर्ने ?
काठमाडौं : नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिले’नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ज’ब’र्ज’स्ती ला’द्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । एमसीसीवि’रुद्ध सोमबार खुलामञ्चमा आयोजित
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले सम्झौता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको हितवि’रुद्ध रहेको दाबी गरे । सम्झौतामा लप्सीफेदी– रातमाटे– दमौली– बुटवल प्रसारण लाइन एमसीसीको सुरक्षामा रहनेलगायत थुप्रै राष्ट्रघा’ती प्रावधान रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘एमसीसीमा लप्सीफेदीदेखि बुटवल, गोरखपुरनजिकसम्म अमेरिकी सुरक्षा हुनेछ भन्ने छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय सु’रक्षाको निम्ति यो लागू हुनेछ भन्ने छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा चु’नौतीका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्ने रणनीति छ । एमसीसीको कानुन लागू हुने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सेना, प्रहरी छैन लप्सी’फेदी टावरको सु’रक्षा गर्न ?
अमेरिकीहरू आउनुपर्ने सुरक्षा गर्न ? कुन स्वाभिमानी नेपालीले मान्छ ?’विप्लवले नेपालको सेना, अदा’लत जनतालाई द’मन गर्नमात्रै हो भनेर प्रश्न गरे । ‘नेपालको का’नुन अदालत छैन ? नेपालको अदालत र सेना जनतालाई द’मन गर्न मात्रै हो ?
क्रा’न्ति’का’रीहरूको वि’रुद्ध फैसला गर्न अ’दालत न्यायाधीश बनाइएको हो ? जनतावि’रुद्ध बनाइएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । विप्लवले पैसाले देश समृद्ध नहुने पनि बताए । ‘पैसाले समृद्धि हुन्छ ? अमेरिकाले दिएको ५० अर्ब दिएर कायापलट हुन्छ ? अमेरिकाले सित्तैमा पैसा दिँदैछ वि’रोध गर्नेहरू दुष्ट हुन् भने एकजनाले ।
तिनीहरू द’लाल हुन्,’ उनले भने, ‘आज पैसा पैसा भन्ने कांग्रेसका साथीहरू पैसाले समृद्धि रोकिएको हो ? के पैसाले विकास हुन्छ ? पैसामात्रै भए हुन्छ ? पैसाले कहिल्यै पुग्दैन । अधिकार, स्वतन्त्रता र देश स्वाधीन हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिको बा’धक पैसा होइन, सत्ता हो । जनताको हातमा सत्ता भयो भने, जनता मालिक भयो भने पहाड बन्छ । नदी बन्छ । देश हरा’भरा बन्छ ।’
पैसाबाट समृद्धि हुन्छ भन्ने सोच दलाल कमिसनखोरको विकृत सोच भएको विप्लवको भनाइ छ । विप्लवले एमसीसी सम्झौतावि’रुद्ध बोलेकोमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रशंसा गरे । ‘मुटुमा र’गत भएको मान्छे ल’ड्नुपर्छ । कायरहरू मात्रै हो डराउने,’ उनले भने, ‘भीम रावललाई भन्यौं । एमाले, माओवादीका क’मरेडलाई भन्यौं । राष्ट्रवादी क’मरेडलाई भन्यौं ।’